AMPANALANA TOAMASINA : Nahitana fatin’olona teo amoron-dranomasina
Hatairana ny an’ireo mpanjono eny amin’ny fari-dranomasina Ampanalana tsy lavitra ny fokontany Antseranampasika Toamasina iny, ny talata 16 avrily lasa teo. 19 avril 2019
Lehilahy teratany malagasy sahabo ho 60 taona no hita faty nitsirara teo amin’ny ahi-maitso tsy lavitra ny moron-dranomasina. Ny angom-baovao no nahalalana fa teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay izy io.
Hatreto, dia mbola mifamahofaho ny vaovao mahakasika ny nahafaty azy io. Ny loharanom-baovao iray, dia milaza fa maty nisy nanapoizana io lehilahy io. Etsy ankilany, ny loharanom-baovao hafa, dia milaza fa maty nisy nananika. Ny angom-baovao fahatelo hafa, dia milaza fa maty namono tena. Momba ny amin’ny mety ho fisian’ny fanapoizinana amin’izao raharaha izao, dia fantatra, araka ny loharanom-baovao avy teo anivon’ny mpitandro filaminana fa anisany anaovana fanadihadiana ny vadiny. Ity farany izay mpampianatra tamina sekolim-panjakana iray tao Toamasina taloha.
Ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa ananan’olona volabe izy mivady. Izy ireo izay fantatra fa manao fitateran’entana avy any La Réunion mankaty Toamasina amin’ny alalan’ny kaontenera. Misy entan’olona an-tapitrisany maro nentin’izy ireo anefa voalaza fa nikatso ao amin’ny fadin-tseranana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ka nivadika lavanty. Mitaky fanonerana ireo entana nivadika lavanty ireo anefa ny tompon’entana. Vokany, olona manodidina ny 20 eo ho eo no nitory azy ireo. Vola amina miliara no takian’ireo mpitory. Fantatra ihany koa fa nanaiky handoa ny vola ilay ramatoa vadin’ilay rangahy nodimandry saingy tsy mety voaloa hatramin’izao.
Mbola mandeha ny fanadihadiana rehetra na misy ifandraisany amin’ireo entana nikatso ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ao izao raharaha vono olona niseho tao Ampanalana Toamasina izao na tsy misy fifandraisany velively.
Ny polisy misahana ny heloka bevava ao Toamasina no miantsoroka ny fanadihadiana. Ho hita eo izay ho tohiny.